दिनको सुरुवात यस्ता खानपान देखी गरे न रोग लाग्छ, न भोक जाग्छ ! – Annapurna Daily
दिनको सुरुवात यस्ता खानपान देखी गरे न रोग लाग्छ, न भोक जाग्छ !
On Jun 10, 2021 2,834
एजेन्सी । हामी विहान उठेर नास्ता गर्छौं । स्वास्थ्यका लागि नास्ता अनिवार्य मानिन्छ । हुन त कतिपयले बिहानको नास्ता अनुपयुक्त हुने तर्क पनि गर्छन् । पछिल्लो समय खानपान सम्बन्धी बढेको सर्तकता र स्वास्थ्य सचेतनाले गर्दा धेरैले बिहानको नास्ता गर्छन् ।
मनतातो पानी, ग्रीन टि वा कागती पानी पिइसकेपछि धेरैले दिनको आरम्भ गर्छन्। त्यसपछि पालो आउँछ नास्ताको । कतिपयले नास्ताको ठाउँमा भात खान्छन् । भात भनेको हाम्रो परम्परामा दाल, भात, तरकारी, अचार आदि हो । अब बिहानको खाना खाइसकेपछि कतिले मध्यन्ह खाजा खान्छन् । त्यसबीचमा चिया पिउँछन् । बिहानको खाना, मध्यन्हको नास्तापछि पालो आउँछ रातको खानाको । अक्सर हामीकहाँ रातको खाना सात, आठ वा नौ बजेको समयमा गरिन्छ । रातको खाना पनि बिहानकै जस्तै दाल, भात, तरकारी हुन्छ ।
यो तालिकालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने के हाम्रो खानपान शैली स्वस्थ्यकर छ ? अर्थात हामीले जसरी, जुन समयमा, जति खाना खान्छौं, त्यो शरीरका लागि आवश्यक छ ? अपुग छ वा बढी भयो ? वास्तवमा हाम्रो खानपान शैली त्यती स्वस्थ्यकर छैन । त्यही कारण धेरैजसो नेपाली खानपानकै कारण रोगी बनेका छन् । यसको पहिलो उदाहरण त ग्याष्ट्रिक हो । यसलाई नेपालीको साझा रोग पनि भनिन्छ । ग्याष्ट्रिक मुलत खराब खानपानकै कारण हुने गर्छ । ग्याष्ट्रिकले पाचन यन्त्रलाई बाधा पुर्‍याउँछ । यो क्रमस अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म पुग्न सक्छ ।
स्वास्थ्यसम्वन्धी विज्ञहरुका अनुसार दिनभरी थोरै थोरै खानेकुरा खाइरहनु स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । तर, धेरै खायो भने त्यसले फाइदाको साटो हानी गर्छ । पटक-पटक गरेर थोरै-थोरै खानेकुरा खाँदा शरीरमा फ्याट जम्मा हुन पाउँदैन किनकी शरीरको फ्याट बर्न गर्ने क्षमता बढ्छ । यसबाट ब्लड सुगरको लेभल पनि नियन्त्रणमा रहन्छ र दिनभर शरीरमा उर्जा प्रवाह हुन्छ । यो पनि ध्यानमा राखनु पर्छ कि खाना बिस्तारै र राम्ररी चपाएर खाँदा सबै पोषक तत्व शरीरले ग्रहण गर्न सक्छ र खाना सजिलै पच्छ पनि ।
हामी किन एकै पटक धेरै खान्छौं ? किनभने हाम्रो खाने तालिका नियमित छैन । जब भोक लाग्छ, हामी मन थाम्न सक्दैनौं । मन अघाउनेगरी खान्छौं । मन त अघाउँछ, पेटले भने बोझ लिनुपर्छ । निश्चित तालिका मिलाएर ठिक समयमा खानेकुरा खादा पेट खाली हुँदैन । भोक अनुभव हुँदैन । फलत जथभाभावी खानबाट बचिन्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो वजन क मगर्न चाहनुहुन्छ भने पनि दैनिक पटक-पटक खानेकुरा खानु आवश्यक छ ताकि तपाईंको मेटाबोलिज्म स्थिर रहोस र क्यालोरी बर्न भइरहोस । यदि क्यालोरी एब्जर्व हुनुका साथसाथै बर्न पनि भइरह्यो भने यो जम्न पाउँदैन र तौल नियन्त्रणमा रहन्छ ।
हामी आजकाल शरिरको आवश्यकताका लागि भन्दा पनि समयका लागि खाना खाने भएका छौं । हामी यति ब्यस्त भएका छौं की खाना खानका लागि पनि कयौंले समय तालिका बनाएका हुन्छौं । तर समय ब्यवस्थापनको यो तरिका सबै तरिकाले हानी नै गर्ने भने अवश्य छैन । विहान १० बजे घडि हेर्दै भन्छौं, ‘अहो दश बजिसकेछ अब त खाना खानुपर्छ ।’अनि अलि विहानको समयमा भन्छौं,‘बल्ल सात बजेको छ के खाना खानु यत्ति छिटो ?’
कोलेस्ट्रोल बोसोयुक्त तत्व हो । कलेजोले यसको निर्माण गर्छ । हामीले खानासँग जुन बोसो प्राप्त गर्छौं, त्यसलाई शरीरले परिवर्तन गरेर कोलेस्ट्रोलको निर्माण गर्छ । यस्तो कोलेस्ट्रोलले शरीरका विभिन्न कोषिकालाई स्वस्थ र मजबुत राख्ने काम गर्छ । जब यसको मात्रा बढी हुन्छ, शरीरमा कैयौँ समस्या देखिन थाल्छ । जसले तौल बढ्ने, मुटुलगायतका समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
स्याउ निकै प्रचलित फलफूल हो । संसारका अधिकांश मुलुकमा स्याउ उपलब्ध हुन्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ शरीरका लागि निकै फाइदाजनक छ । स्याउ नेपालमा पनि निकै प्रचलित छ । यसबाट पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन र भिटाभिन प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको नियमित सेवन गर्दा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउने काम मात्र गर्दैन कि रक्तचापलाई पनि सामान्य राख्ने काम गर्छ ।
स्याउमा पेक्टिनको घुलनशील रेसा हुन्छ । जसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउने र शरीरका लागि एन्टिब्याक्टेरियल फुडको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छ । यसलाई दाना या जुसका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई ब्रेकफास्ट र स्न्याक्सका रूपमा लिँदा पनि राम्रो हुन्छ ।
अमिलो फलफूलमा यस्तो इन्जाइम पाइन्छ, जसले मेटाबोलिजमको प्रक्रियालाई तीव्र गरेर कोलेस्ट्रोल घटाउन सहयोग गर्छ । कागतीमा भएको घुलनशील फाइबरले शरीरबाट ब्याड कोलेस्ट्रोललाई रगतमा जान रोक्ने काम गर्छ । यसमा पाइने भिटामिन सीले रक्तनली सफा गर्छ ।
शरीरमा जम्मा भएको ब्याड कोलेस्ट्रोललाई पचान प्रक्रियाका माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । त्यसैले यसको कुनै पनि परिकार बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो– सलाद, चिया, खाना, सर्बतलगायतमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टमाटरको प्रयोगले हर्ट स्ट्रोकको खतराबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले रक्तनलीमा रगत जम्न रोक्ने काम गर्छ । रगत जम्दा रक्तनलीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । जसले हर्ट अट्याक, स्ट्रोकजस्ता गम्भीर रोगको खतरा निम्त्याउँछ । तर, यसको प्रयोगमा भने ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । टमाटरको अत्यधिक प्रयोग भने स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन । एजेन्सीको सहयोगमा